अाेखलढु‌ंगा रेडक्रसलार्इ नमुना बनाउँछु : सभापति राजभण्डारी – www.visionfm.org
अाेखलढु‌ंगा रेडक्रसलार्इ नमुना बनाउँछु : सभापति राजभण्डारी
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०३, २०७४ समय: ५:४५:४७
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा ओखलढुंगाको सम्पन्न २६ अाैं जिल्ला अधिवेशनले सुनम राजभण्डारीको नेतृत्वमा १२ सदस्य समिति चयन गरेको छ । लामो समय देखि जिल्लामा सकृय संस्थाका रुपमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटीलाई थप व्यवस्थित र नमुना बनाउने नव निर्वाचित सभापति सुमन राजभण्डारीको योजना छ । उनै सभापति राजभण्डारीसँग भिजनकर्मी एसबी जेरोले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
सभापति ज्यू स्वागत छ ।
बधाई अनि सफल कार्यकालको शुभकामना पनि ।
सम्पुर्ण भिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
लामो समय शिक्षण पेशामा रहनुभयो,अवकाश पाए लगतै समाज सेवामा लाग्नु भयो, होइन ?
हो, मैले यो रिटायर लाईफ चाहीँ यो जनताको कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई भावनाले उत्प्रेत गरायो र मलाई सबै भन्दा यो क्षेत्र मन पर्यो र किनभने मानबीय बिशुद्ध पेशामा लागेर सेवा गर्न सक्ने संस्थाको रुपमा देखे यो भित्र गएर मैले सेवा गर्नु पर्छ भन्ने भावनाले मलाई छुयो तसर्थ म यहि क्षेत्रमा लागेँ ।
शिक्षण पेशामा रहदाँ पनि रेडक्रसमा हुन्थ्यो होइन ?
बिद्यार्थी जिबन देखी नै म क्रियाशिल थिए । जुनिएर रेड्रक्रस सर्कलमा बसेर काम गर्थे त्यो बेला देखी नै मैले रेडक्रसको मूलय मान्यताहरु बुझेको थिए रेडक्रकस चाहीँ एउटा पबित्र संस्था हो । जुन संस्थामा लागेसी हामीले काम गर्नु पर्छ र मानबीय जिबनमा सेवा गर्नु पर्छ भन्ने भावनाले मलाई त्यतिबेला देखीनै छुएको थियो त्यस पछि मैले शिक्षण पेशा लिए शिक्षक पेशा देखी नि मैले कहिले जुनिएर सर्कलको शिक्षक नायक बनेर पनि काम गरे पछि गएर मैले रेडक्रसको कार्य समितीमा बसेर काम सुरु गरे र अहिले ३०,३५ बर्ष भयो रेडक्रसमा अप्रत्यक्ष रुपमा काम गरेको ।
पछिल्लो समयमा मानव सेवाका नाममा कमाउ धन्दा चल्छ भन्छन् नि ?
जनताको सेवा गर्न पाउनु नै मेरो लागी एकदम महत्वपुर्ण लाग्छ । जो गरिब दुखी निमुखा जो बिभिन्न घटनामा परेको मानिसहरु जो छट्पटाईरहेको जसलाई पिडा छ उनिहरुलाई सेवा पु¥याउनु नै मलाई महत्वपुर्ण लाग्छ । पैसा नै सबैकुरा होइन । सेवा गर्नु नै भन्दा ठुलो धर्म जस्तो पनि लाग्छ त्यसैले रेडक्रस तिर लागेर सेवा गर्ने भावना बोकेको छु ।
रेडक्रसको मर्म र भावना बुझेरै तपाई लाग्नु भयो वा कसैको इसारामा ?
मैले चाहीँ विद्यार्थी जीबनमा जुनियर रेडक्रस सर्कल भित्र रहेर यो रेडक्रस भनेको चाहीँ के होला,के गर्छ यसले,यो संस्थाले कसरी काम गर्छ किन रेडक्रस भनेछ भनेर सर्कलमा रहेर काम गर्दा धेरै बुझे मान्छे भए पछि सेवा गर्नु अनिबार्यता रहेछ । त्यसैले एक किसिमले सेवा गर्नु नै धर्म हो लाग्छ । त्यस पछि म पनि रेडक्रसमा अग्रसर हुदै गएको छु ।
जुनियर रेडक्रस सर्कल बाट तपाईले सुरु गर्दै अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाईटि ओखलढुंगाको सभापति पदमा निर्बाचित हुनुभएको छ, जिम्मेवारी पनि बढेको छ । के छ तपाइको योजना ?
नेपाल रेडक्रस जिल्ला शाखा ओखलढुंगाले जुन मानबीय सेवामा गर्र्ने कार्यहरु गरिरहेको जस्तै आगलागी, भुकम्प, दैबी प्रकोप लगायत यी सम्पुर्ण कामहरु रेडक्रसको आफ्नो मुल्य मान्यता अनुसार रहेर रेडक्रसले सेवा गरिरहेको छ । जिल्लामा अहिले १२ वटा उपशाखाहरु चलाएमान छ । ति उपशाखाहरु मार्फत धेरै सेवाहरु पुगेको छ । जिल्लाले पनि यस्तो सेवाहरु जुन दैबी प्रकोपका कार्यहरुमा सेवा सुबिधा प¥याईरहेको छ । भुकम्पले क्षेति पु¥याएको ओखलढुंगाको क्षेत्रहरुमा पनि भुकम्प कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन् । भुकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमहरु हर्कपुर,प्राप्चा र बर्णालुमा कार्यक्रमहरु संचालन भईरहेको छ । रेडक्रसका नियमित कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउने र योजनाबद्ध रुपमा नयाँ रोचक कार्यहरु गर्ने योजना छ,त्यसमा तपाईहरु जस्ता समाजका अगुवाहरुको साथ आवश्यक छ । ओखलढुंगा रेडक्रसलाई नमुना बनाउन पहल गर्छ ।
यी ठाउहरुमा कस्तो खालको कार्यक्रम गरिरहेको छ ?
यो चाहीँ भुकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम हो । खास गरि त्यहाँको जनताहरुलाई सेवासुबिधा बिभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता र जिबीकापार्जन सम्बन्धी ४ वटा कार्यक्रमहरु गरिहेको छ । यो संगै नेपाल रेडक्रसले संस्था गत क्षमता बिकासको कार्यक्रमहरु अगाडी बढाईरहेको छ ।
अन्य गाउपालिकाहरुमा जानका लागि तयारी के गर्नु भएको छ त ?
यहि चैत्र ५ गते एउटा बैठक बसेर अन्य सदस्यहरु पनि मनोनित गर्न बाकी काम सक्छौं । त्यसबेला नै कामको बाडफाड गरेर अगाडी बढ्छौं । सबैको जिम्मेवारी सहितको समिती गठन गरेर अगाडी बढ्ने योजना बनाएका छौं ।
ओखलढुंगा जिल्लामा रेडक्रसको कुनकुन ठाउमा कति वटा उपशाखाहरु छन् ?
जम्मा १२ वटा शाखाहरु छन् । ओखलढुंगा जिल्लाका गाम्नाङटार, पोकल, सिंहदेबी, नर्मदेश्व, खिजिफलाटे, बर्णालु, ठुलाछाप, ओखलढुंगा लगायतका स्थानमा शाखाहरु छन् ।
रेडक्रस भन्ने बितिकै एउटा मानविय साहायताको लागि काम गर्ने संस्था हो भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ ।
के यो भनाई अनुसार काम गर्न सकिएको छ त ?
यो बनाइ र बुझाई सत्य हो । रेडक्रसको आफ्नै मुल्य मान्यता छ जति छ त्यो सबै मानबीय सहाहायता कै लागी हो । जहाँ बाढी पिडीत,आगजानी भुकम्प मात्र नभई सबै ठाउमा सेवा गरिरहेको छ जहाँ बिपद पर्छ त्यहि रेडक्रस पुगेको छ ।
रेडक्रसले आपतमा परेकालाई सहयोग चाहीँ कसरी गरिहेको छ ?
राहात समाग्री प्रदान गरेर जस्तै, खाद्यान्न, नगदी, लाताकपडा, भाडा बर्तन सबै कुराहरुमा सहयोग गरिरहेको छ । कसैलाई एकलो छु भन्ने महशुस गर्न दिएको छैन् रेडक्रसले मानबीय सहयोग गरिरहेको छ ।
विपद्मा परेको व्यक्तिहरुले कसरी रेडक्रस सम्म आईपुग्छ ? त्यसको बिधी प्रक्रिया के छ ?
जिल्ला सम्म आईपुग्न सक्नुहुन्छ जहाँ हाम्रो रेडक्रसको उपशाखाहरु छन् त्यहि गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ उपशाखामा जादाँ धेरै सजिलो हुन्छ त्यति पनि गर्न सक्नु भएन भनी हामी कहाँ खबर आईपुग्नु पर्यो । स्थानीय तह सँग सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।
जहाँ विपद् त्यहाँ रेडक्रस भन्ने भनाई नै छ । त्यसैले विपद् परेका बेला सबैले रेडक्रलाई सम्झन सक्नुहुन्छ ।
अहिले सम्म आउदाँ रेडक्रसले केके उदाहरणीय कामहरु गरेको छ ? समिक्षा गरौं न ।
धेरै कामहरु गरेको छ । २०७२ सालको भुकम्पमा आएको धेरै राहातहरु बाढेको छ । अहिले पनि दिने क्रममै छौं । जहाँ दुख परेको छ दैबी प्रकोप भएको ठाउमा रेडक्रस पुगेको छ र अझै बिभिन्न संघसंस्थाहरु संग समन्वय गरेर राहात प्रदान गर्ने जर्मकोमा छौं ।
अब अन्त्यमा छौं । अब कति समयमा कहिले सम्म ओखलढुंगा जिल्लामा प्रत्येक नगरपालिका, प्रत्यक गाउपालिकामा उपशाखा स्थापना गर्नु हुन्छ के छ योजना ?
तिन चार बर्षमा बनाउने कार्यमा हामी अगाडी बढ्ने छौं । योजना बनाएर लागी पर्ने छौ ।
प्राय सबै कुरा आईसकेको छ । सबै जनताहरुमा परेको घाउमा मलम लगाउदै रेडक्रस अगाडी बढिरहेको छ । कुनै नराम्रो भावना नबोकी सदैव सेवा रेडक्रस लागी रहेको छ । उपशाखाहरु लाई अझ चलाएमान बनाएर सेवामा सदैव लागी पर्ने काम गछौं ।
हस् समय र बिचारको लागी धन्यवाद ।
यस भिजन नेपाल परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरा केही भनाई राख्ने अबसर दिनुभयो पुन. धन्यवाद ।